BRAEKING NEWS: Iccitii masaraa mootummaa fi tika mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaa keessaa baate – Kichuu
HomeBRAEKING NEWS: Iccitii masaraa mootummaa fi tika mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaa keessaa baate
#BRAEKING NEWS Iccitii masaraa mootummaa fi tika mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaa keessaa baate
Lolli Kaaba biyyattiitti akkuma jalqabeen qaamota sadiif dirqamni olaanaan kenname.
1. Waraana Raayyaa ittisa biyyaa
2. Tika Biyyoolessaa
3. Miidiyaalee dha.
Qaamotni kunneen sadan sirnaan wal dubbisanii guyyoota kudhan hin caalle keesaatti waraana injifannoon goolabuu fi sana booda miidiyaaleen dhaabbataan olola mootummaa injifataa jedhee akka itti fufu karoorfame. Akkuma duulli (operation) kun jalqabeen odeeffannoon tika bira gahuu fi waraana bira gahu gargar tahaa dhufe. Sun walshakkii uumuu jalqabe. Kanaaf jijjiirraan aangoo taasifamee Tamasgeen Xurunee hooggana tika biyyoolessaatti dhufe. Muudamni kun waan rakkisaa lama fidee dhufe
1. PPn Amaaraa aangoo gubbaadhaa hanga gadii diriirfachuuf hawwaa turan itti milkaa’uun PP Oromiyaa guutuutti tika keessaa dhiiban. Haala kanaanis
itti gaafatamni immigration
itti gaafatamni qajeelcha tikaa(kan double agents) ijaaru
itti gaafatamni tika humna qilleensaa fi dinagdee
aangoo irraa kaafaman. Kanaan PPn Oromiyaa itti gammachuu waan hin qabneef walshakkii fi walharkatti kuffiisuun jalqabee jira. Tika keesaaa hedduunis hidhamanii jiru.
2. Humni TPLF gamaggama hooggantoota mana maree raayyaa ittisaa(Abiy) dabalatee ala tahee argame.Rokkeettiin, taankiin(Kan iizii Kaabaa 167 ture) kan isaan beekanii ol tahee argame. Miidiyaalee irratti bahamee sobni dubbatame saaxilamaa tahe. Kana irraa ka’uun guyyaa kaleesaaa gamaggama Humna RIB fi Operation walii galaaf walgahiin gaggeeffame. Walgahiin kun jeneraal Alamsheet Dagifee fi Baacaa Dabalee adda waraanaa Raayyaa qaamaan erga daawwataniiti. Walgahii kana irratti Amaarri akkuma olaantummaa isaanii mirkaneeffachuuf hojjetan Jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa humna addaa naannoo Amaaraa tahee miseensotni kumaatamaan akka leenjifamaniif baajata biliyoona
2.1 mootummaa federaalaa gaafatan. Tiknis humna isaa jabeeffatee basaastota kumaan bobbaasuuf baajata 1.26 biliyoona gaafate. Kana irra darbee hojiin dippiloomaasii maallaqa miliyoonaan lakkaa’amu baasisaa jira. Walgahii kana irratti Abiy gaaffii gaafate. ” ni injifatna moo injifatamna?” jedhee gaafate. Gorsaan olaanaa dhimma nageenyaa muummichaa ministeeraa Obbo Maammoon ” baajata kana hin baasnu taanaan ni injifatamna” jedhee deebise. Sana irraa koloneel Abiy aaree gara itti gaafatamaa baankii daldala Itoophiyaa, Abbabee Saannootti bilbile. Abbabee Saannoo “anoo hojii gadhiisuun barbaada, boordiitti xalayaa galfadheera.” jedhee deebise.
Bifa kanaan walgahichi walii galtee malee bittinnaa’ee dhiyeessiin meeshaa waraanaa kaabaa dhibee RIB kumaatamaan booji’amaa jira. PPn waan godhu dhabee miidiyaadhaan “ሰበር ዜና” labsaa jira. Dargaggootin Tigraay maqaa SAMRII jedhamuun wal ijaaruun qubattoota basaasummaaf Sudaan seenan, RIB fi dabballoota Amaaraa Kibba Lixa Tigraay irraan adabuun mataa dhukkubbii PP haaraa dha.
Lola kana keessatti abbaan barbaade injifate Oromoof injifannoo miti. Haala qabatamaa biyyattii SAFFISAAN DIIGAMAA jiraachuu ishee fi lolichi lola olaantummaa nafxanyaa deebisuuf godhamaa jiru ta’uu isaa hubannee, hatattamaan Oromiyaa Keessatti humna WBO jabeessinee biyya keenya oromiyaa dhuunfachuu qabna.